Gelatin la cuni karo, Gelatin Dawooyinka, Collagen - Gelken
Kusoo dhawow Gelken Gelatin
Waxaa la aasaasay 2012, Gelken Gelatin waa soo saare xirfadle ah soo saarida gelatin Daawooyin tayo sare leh, Gelatin la cuno iyo kolajiin biyo leh. Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dawada, kaabsulka, warshadaha cuntada, waxyaabaha la isku qurxiyo, wax soo saarka caafimaadka iyo warshadaha kale.
Iyadoo ay weheliso si buuxda kor loogu qaadayo khadka wax soo saarka tan iyo sanadkii 2015, xaruntayadu waxay ku jirtaa heerka ugu sarreeya adduunka. Waxaan haynaa nidaam maareyn tayo leh oo dhameystiran iyo nidaamka maareynta badbaadada cuntada oo ay cadeysay ISO9001, ISO22000, FSSSC22000, GMP. Kooxdayada wax soo saar waxay ka socdaan warshad gelatin sare leh khibrad 20 sano ah. Hadda waxaan haynaa 3 khad soo saaris gelatin ah oo leh sanadkiiba 15,000 tan iyo hal khad Hydrolyzed Collagen oo leh awood sanadle ah 3000tons
Hadafkeenu waa in aan siino alaab aamin ah, tayo sare leh oo xasiloon oo saldhig u ah baahida macaamiisha.
Xarunta Darajada Adduunka.
15000mt Awood wax soo saar sanadle ah.
Tiknoolajiyada wax soo saarka casriga ah iyo tijaabada 20 sano.
Waxsoosaarka xasiloonida & Buuxda.
U qaado dhammaan mas'uuliyadda alaabtayada iyo adeeggayaga.
400 + SOPs waxay hubiyaan inay bixiyaan xasillooni ...
Waqti degdeg ah oo deggan.
Kooxda iibinta khibrad leh & taageero farsamo oo xirfad leh.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Gelken' ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa kaabsoolooyinka adag, kaabsoosha jilicsan, kiniiniyada, nacnaca cirridka, ham, yogurt, mousses, biirka, casiirka, waxyaabaha qasacadaysan ...
Kulliyadaha Kala-baxa caafimaadka
Xaashida Gelatin ee Mousse Cake
Booqo Xiamen Gelken
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan wadaagno alaabtayada iyo khibradeena. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, weydiin ah ama fikrado ah oo aad jeceshahay inaad nagala hadasho, fadlan toos noola soo xiriir.
Maxaan u dhahnaa gelatin wuxuu daboolayaa baahida caalamiga ah ee waara?
Sanadihii la soo dhaafay, bulshada caalamku waxay aad iyo aad ugu sii jeesatay horumarka waara, is afgaradna waa laga gaadhay adduunka oo dhan. Marka loo barbardhigo xilli kasta oo taariikhda ilbaxnimada casriga ah, macaamiisha ...
Healthplex Expo 2020 waxaa la qabtaa Nofeembar 25th, 2020
Healthplex Expo 2020 waxay si guul leh uga soo ururisay dhammaan noocyada ugu waaweyn ee caafimaadka iyo nafaqada meelo kala duwan oo adduunka ah. Waxaa lagu qabtay Xarunta Shirarka Qaranka iyo Carwada (Shanghai) laga bilaabo Noofambar 25th ilaa 27th ee 2020 illaa 3 maalmood. Bandhigga, togeth ...
Sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay ee shisheeyaha, suuqa caalamiga ah ee kolajka ayaa la filayaa inuu gaaro US $ 7.5 bilyan sannadka 2027, iyadoo heerka dakhliga guud ee ku saleysan dakhliga uu yahay 5.9%. Kobaca suuqa waxaa loo aaneyn karaa baahida weyn ee loo qabo wadajirka ...